Ganacsiga ayaa hadda aqbalaya codsiyada deeqaha Nidaamyada Gaadiidka ee koronto - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga ayaa hadda aqbalaya codsiyada deeqaha Nidaamyada Gaadiidka ee korantada
$ 10.6 milyan ayaa la heli karaa si loo ballaariyo kaabayaasha kaabayaasha gawaarida korontada ku shaqeeya ee gobolka Washington
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa hadda aqbashay codsiyada deeqda cusub iyada oo loo marayo barnaamijka Korantada ee Nidaamka Gaadiidka (ETS). Codsadeyaasha suurtagalka ah waa inay qayb ka noqdaan dowladda hoose ee gobolka Washington, koronto tafaariiqda u adeegta gobolka Washington, ama urur kasta oo la shaqeynaya hay'adaha u qalma.
Dhammaan noocyada gaadiidka way uqalmayaan, Ganacsiguna wuxuu mudnaanta siinayaa xalalka hal-abuurka ah ee caqabadaha la oggol yahay ee keenista iyo adeegsiga kaabayaasha lacag-bixinta. Mashruucyadu waa inay u adeegaan ugu yaraan mid ka mid ah kuwan soo socda:
Gaadiidka raxan raxan ee dawlada hoose
Lacagta goobta shaqada
Deggene qaybo badan oo deggan oo lacag bixinaya
Kaabayaasha dekedda, badda ama diyaaradaha
Barnaamijka ETS waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo isbeddelka joogtada ah ee suuqa gaadiidka korantada ee gobolka Washington iyo in la dardar-geliyo korsashada EV-yada iyo maraakiibta si loo gaaro himilooyinka cimiladeenna. Barnaamijku wuxuu si gaar ah culays u saarayaa wax ka qabashada baahiyaha bulshada iyo dadka nugul ee ay saameynta weyn ku yeelatay isbedelka cimilada iyo wasakheynta nidaamyada gaadiidka.
“Deeqda Korantada ee Korantada waa mid cusub oo muhiim u ah mustaqbalka tamarta nadiifka ah ee gobolka Washington,” ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. “Hawlaha gaadiidku waxay gacan ka geystaan ​​in ka badan 40% qiiqa guud ee qiiqa Washington, iyo sidoo kale waxyeelo wadaaga wasakhda. Muhiimad ahaan, deeqdani waxay mudnaan siineysaa bulshooyinka aan adeegyada loo helin iyo kuwa si aan habooneyn u saameeyay isbeddelka cimilada iyo wasakheynta nidaamka gaadiidka. Iyada oo diirada la saarayo khibrada bulshada iyo ismaamulka, Ganacsiga wuxuu mudnaanta siinayaa mashaariicda lagu hormarinayo tikniyoolajiyadda gaadiidka eber-ka-bixida oo qof walba wax u tareysa. ”
Qalabka arjiga ee internetka
Booqo Bogga ETS si loo helo dhammaan agabyada arjiga iyo macluumaadka ku saabsan aqoonta ugu yar iyo mudnaanta barnaamijka. Su'aalaha farsamada waxaa lagu hagaajin karaa Forrest Watkins, maareeyaha barnaamijka deeqda, (360) 522-3290, forrest.watkins@commerce.wa.gov.
Barnaamijka ETS waxaa lagu maalgeliyaa iyada oo loo marayo gobolka Washington Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah (CEF). CEF waxay maal gashaa mashaariic bixisa faa iidada guud ee dadka Washington iyada oo loo marayo keenista teknoolojiyad tamar nadiif ah oo keydineysa tamarta isla markaana yareyneysa kharashka tamarta, yareynaysa qiiqa hawada ee waxyeellada leh, ama haddii kale kordhinaysa madaxbannaanida tamarta ee gobolka. Laga soo bilaabo 2013, sharci dejiyeyaashu waxay ku bixiyeen $ 152 milyan Sanduuqa Nadiifinta Tamarta ee loogu talagalay mashaariicda hal-abuurka ah ee casriyeynta shabakadda iyo keydinta tamarta; dabaysha, qorraxda iyo tamarta kale ee dib loo cusboonaysiin karo, iyo koronto dhalinta gaadiidka oo ay ku jiraan gawaarida, maraakiibta iyo diyaaradaha.
sanduuqa tamarta nadiifka ahhorumarinta dhaqaalahakaabayaashaWar-saxaafadeedWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Barashada wejiyada badan ee hoy la'aanta ah Ganacsigu wuxuu $ 17.2 milyan ugu abaalmariyay xarumaha waxbarashada hore →